Sony weputara FES Watch U 2, ihe eji ahazi smartwatch | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ezie na akụkụ nke elekere anya dị ka ọ pụtara, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na-eme mkpesa banyere eziokwu doro anya, obere ikike nke batrị. Ọ gaghị abụ ihe dị mma ịnwe ọkaibe smartwatch nke anyị hụrụ n'anya nke na-adịgidekwa ọtụtụ ụbọchị na-enweghị ebubo? Ọfọn, nke a bụ kpọmkwem amụma anyị na-ewetara gị taa Akụkọ akụrụngwa.
Sonylọ ọrụ Sony Fashion Entertainments (otu enyemaka nke Sony) amalitela ọgbọ nke abụọ nke ya Sony FES Lelee U na Japan, a smartwatch bụ n'ezie ihe nke a ejiji ngwa na na ọkọnọ na kọmputa ink ihuenyo, otú ya obodo kwụụrụ dị nnọọ elu.
FES Lelee U: kwụ ọtọ, slimmer, nwekwuo ike ịhazi
Elekere ọhụrụ FES Lelee U Sony na-eji ink elektrọnik eme ihe na, ọ bụ ezie na ihe mbụ na-abata n'uche bụ ike nchekwa na nnwere onwe ya, eziokwu bụ na ịhọrọ maka teknụzụ a na-enye uru ndị ọzọ, dị ka mbelata nke ngwa eletriki n'ụzọ dị otu a FES Watch U dị gịrịgịrị karịa smartwatch ọ bụla ọzọ dị n'ahịa, a belatala okpokolo agba ya.
Mana obi abụọ adịghị ya, uru kasịnụ bụ nke ahụ ọdịdị na-agbanwe agbanwe nke ihe ngosi e-ink emeela ka ọ gbasaa na eriri ahụ nke elekere. Nke a pụtara na na omume onye ọrụ ahụ nwere ike hazie eriri nwere otu motif na-egosi na ihu nche. N'ihi ya, ọ na-enye anyị mmetụta nke ịnọ n'otu ibe, nke mere ka ọ bụrụ ezigbo ngwa ejiji.
Ihe omuma ohuru nke uzo nke abuo bu na ndị ọrụ ga-enwe ike ịmepụta ihu nche ha na foto ha, ya mere ogo nhazi nke kachasị. Iji mee nke a, ọ dị mkpa iji ngwa mgbakwunye dị maka iOS na maka android. Site na ya, ndị ọrụ nwere ike iji igwefoto igwefoto ha were nseta ihuenyo wee họrọ ngalaba kwụ ọtọ ka agafere ya na ihu FES Watch U na ojii na ọcha.
Sony FES Watch U dịlarị na Japan na nhọrọ agba atọ ị hụrụ na ahịrị ndị a; na White na Silver ụdị nwere Ẹkot eri nke $ 417 mgbe adịchaghị Black nlereanya adahade $ 544. N'oge a, atụmatụ mmeba mba ụwa amaghi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Sony weputara FES Watch U 2, ihe nlere nke oma nke oma